मोडलिङ गर्दागर्दै जुम्बा इस्ट्रक्चर : निशा | Screennepal
२०७५, १७ कार्तिक शनिबार ०७:१२screennepalUncategorized0
मोडलिङलाई ‘प्यासन’का रुपमा लिएकी निशा लिम्बू पोमु पछिल्लो समय फिल्मी अभिनयमा पनि सक्रिय छिन् । सन् २०१२ मा ‘मिस लिम्बू’मा सहभागीपछि व्यवसायिक मोडलिङमा होमिएकी निशाले हालसम्ममा दर्जनौँ म्युजिक भिडियो र फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘शान्ति’ १४ मंसिरमा रिलिज हुँदैछ । निशाले तीन महिनाअघि झापाको विर्तामोडमा ‘राइजिङ फिटनेश स्टुडियो’ सञ्चालनमा ल्याएर आफूलाई व्यवसायीमा पनि सक्रिय गराइएकी छन् । यिनै मोडल तथा ‘सटिफाइड जुम्बा इस्ट्रक्चर’ निशासँग कुराकानी ।
मोडलिङयात्रा कस्तो चलिररहेको छ ?
– ठीकै छ । केही महिनायता भने मोडलिङलाई भन्दा फिटनेशलाई समय दिँदै आएकी छु । हालै झापाको विर्तामोडमा ‘राईजिङ फिटनेश स्टुडियो’ सञ्चालनमा ल्याएकी छु । त्यसैलाई समय दिँदै आएकी छु ।
मोडलिङ गर्दागर्दै फिटनेश व्यवसायिकतिर कसरी ?
– म जुम्बा इस्ट्रक्चर पनि हुँ । फिटनेश भनेको सबैलाई आवश्यक पर्छ । मोडल, कलाकार र व्यवसायलाई नै बढी फिट हुनुपर्छ । त्यसैले फिटनेशलाई पार्टटाइम व्यवसायीका रुपमा अँगालेकी हुँ । मोडलिङ त आफ्नै ठाउँमा छँदै छ ।
तपाइँ अभिनीत फिल्म ‘शान्ति’ आउँदो १४ मंसिरमा रिलिज हुँदैछ । फिल्मबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
– भनिन्छ नि, आफूले जन्माएको सन्तान सबैलाई माया लाग्छ । त्यस्तै, आफूले गरेको कामबाट अपेक्षा नगर्ने भन्ने हुँदैन । फिल्म ‘शान्ति’मा मिहिनेत गरेकी छु । मिहिनेत गरेअनुसार फलको अपेक्षा गरेकी छु ।
‘दुस्साहस’ र ‘शान्ति’ दुई फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ । त्यसमध्ये ‘शान्ति’ रिलिज हुने भएको छ । आफ्नो डेब्यु फिल्म कुनलाई लिनुहुन्छ ?
– अभिनयका हिसाबले मेरो डेब्यु फिल्म ‘दुस्साहस’ नै हो । त्यसपछि मात्र ‘शान्ति’ गरेकी हुँ । तर, ‘शान्ति’ अगाडि रिलिज हुने भएको छ । म ‘दुस्साहस’लाई नै आफ्नो डेब्यु फिल्म मान्छु ।
फिल्म ‘शान्ति’मा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ?
– एकदमै सामान्य र सुशिल नारीको भूमिका गरेकी छु । फिल्ममा शीर्ष भूमिकामा देखिँदैछु । यो फिल्म रिलिज भएपछि निशाबाट शान्तिको उपमा पाउने आशा गरेकी छु ।
तपाइँ रियालिटीमा चञ्चल र फेसनेवल हुनुहुन्छ । फिल्ममा सामान्य युवती भएर काम गर्न गाह्रो भएन ?
– खाशै गाह्रो भएन । म हेर्दामात्र चञ्चल र फेसनेवल हुँ । मैले जीवनमा धेरै संघर्ष गरेकी छु । सुख–दुःख केहो भन्ने बुझेकी छु । त्यसैले म आफूलाई जस्तो भूमिकाका पनि ढाल्न सक्छु ।
तपाइँलाई कलाकारिताको रंगचाहिँ कसरी चढ्यो ?
– म सानैदेखि नाच्न भनेपछि हुरुक्कै हुन्थेँ । स्कुल पढ्दा डान्स कम्पिटिशनहरुमा भाग लिन्थेँ । यसैक्रममा २०१२ मा सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस लिम्बू’मा सहभागी भएँ । सो प्रतियोगितामा मैले ‘मिस ट्यालेन्ट’को उपाधि पाएकी हुँ । त्यसपछि मलाई विभिन्न गीतमा मोडलिङका लागि अफर आउन थाल्यो । मेरो मोडलिङ करिअर ‘मिस लिम्बू’मा सहभागी भएपछि सुरु भएको हो ।
जीवनलाई व्यवस्थित गर्न विवाह गर्नुपर्छ भनिन्छ । तपाइँ के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
– अवश्य पनि विवाह एक दिन गर्नैपर्छ । म पनि सोच्दैछु । तर, केही वर्षपछि मात्र । अझै एक/दुई वर्ष कलाकारिता र व्यवसायीमै रमाऊ भन्ने सोच छ ।
‘अफेयर्स’ त चल्दै होला नि ?
– छैन । अहिलेसम्म अफेर्यस चलाउनलाई मन मिल्ने केटा नै पाएकी छैन । प्रेम प्रस्ताव त टन्नै आउँछ । तर, कोहीसँग मन मिल्दैन, कुनैसँग लेवल मिल्दैन । त्यसैले अहिलेसम्म सिंगल नै छु ।
लिम्बूहरुले आफ्नी छोरी लाहुरेलाई दिने चलन छ । तपाइँलाई लाहुरेहरु पनि त माग्न आए होला ?
– कति आए–आए । तर, माग्न आए भन्दैमा विवाह गर्ने कुरा भएन । यो जामान पहिलेको जस्तो छैन । अहिलेको जमानामा नारी स्वतन्त्र जिउन चाहन्छ । तैमाथि म मोडल तथा कलाकार हुँ । मन नमिल्न सक्छ । त्यसैले लाहुरेहरु माग्न आएर पनि रिजेक्ट गरेकी छु ।
स्कुल/कलेज पढ्दा लभ–ट्राजिटी प-यो कि परेन ?
– त्यो बेला लभ भनेको केहो थाहा हुँदैनथ्यो । लभ त हुन्थ्यो । तर, आज लभ प¥यो भोलि छुट्थ्यो । वास्तै हुन्नथ्यो । केटाहरुले मलाई पाउन हात काट्नेदेखि लिएर रगतले चिठ्ठीसम्म लेख्थे । त्यो दिनहरु सम्झिँदा रमाइलो पनि र तितो पनि लाग्छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा कलाकारिता र जीवनलाई कसरी बुझ्नु भयो ?
– संघर्षपछिको अनुभूति हो जीवन । भोगेपछि मात्र जीवन केहो भन्ने बुझिन्छ । र, त्यो भोगाइमै जीवनको वास्तविकता पनि पाइन्छ । मैले आजसम्म भोगेको कुरा यही हो । तर, म खुसी नै छु । म जहाँ र जुन क्षेत्रमा छु, एकदमै सन्तुष्टि छु ।
Previous Postचन्दालाई ‘मिसेस एसिया प्यासफिक’ उपाधि Next Post‘स्मुले सिंगिङ’ प्रतियोगितामा कडा प्रतिस्पर्धा